မြင်နိုင်ကြစေ.. – The Only Way To Go!
Posted on December 19, 2012 November 15, 2019 by barnay
တနေ့တာကို တနေ့တာလို့ မြင်တာထက် ဒါဟာလည်း ကိုယ့်ဘဝပါပဲလို့ မြင်လိုက်တာက မိမိဘဝမှာ တန်ဖိုးထားဖို့ သတိလေး ပို ထင်ရှားသွားစေပါတယ် ….။
ကျွန်ုပ်တို့တတွေ အားလုံး နေ့တိုင်း … နေရေး ၊ စားရေးတွေအတွက် ဝတ်မပျက်အောင် နေထိုင်ရင်းနဲ့ ကိုယ့်ပိုင်ဘဝအသီးသီးတွေကို သတိတရား ထားပြီးနေဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ .. အရှိတရားတွေကိုသာ သတိထားပြီး မြင်တတ် နှလုံးသွင်းတတ်ဖို့ လိုပါတယ် .. ။
သတိတရားနဲ့ ပြည့်စုံဖို့မှာ မရှိတဲ့အရာကို မကြည့်ပဲ ရှိတဲ့အရာကိုသာ ကြည့်မှ .. သိသာထင်ရှား ခရီး အပေါက်ဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် .. ။
ယခု ကျွန်ုပ်တို့ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ တနေ့ချင်း … လူ့တဘဝထဲမှာပင်ကိုပဲ ကံကံရဲ့ အကျိုး သက်ရောက်မှု သဘောတရားလေးအတိုင်း သံသရာလေးတွေ အမြောက်အများ ရှိနေလေတော့ .. သံသရာ လည်ခြင်းသဘော အကောင်းအဆိုးကို ကျွန်ုပ်တို့ လူတွေ သိပေမပေါ့ …။
ထို့အတူပါပဲ ဘဝအဆက်ဆက် နိမ့်ချည်မြင့်ချည် ကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့ ဘဝသံသရာဟာလည်း အဲ့ဒီသံသရာလေးတွေ အတိုင်းပဲ …မိမိထားရှိတဲ့ စိတ်စေတနာလေးတွေအပေါ်မှာပဲ အကျိုးဆက်ကလေးတွေ ကွဲပြား သွားကြပြီး .. ရရှိ ရောက်ရှိ ဖြစ်တည်မှုတွေဟာလည်း ကွဲပြားသွားကြတယ်… …။ ဒီတော့ .. မိမိအသိစိတ် .. မိမိရဲ့ ဉာဏ်စွမ်းအားတွေကို အချိန်တွေနဲ့ လိုက်ပြီး … သတိမေ့ ငေးမော မနေစေပဲ … မြေဆီကောင်းတုန်း မျိုးစေ့ကောင်းတွေ ချဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် …(ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် အပါအဝင် လူတိုင်း မိမိကိုယ်တိုင်အတွက် တကယ်လိုအပ်ပါတယ် .) အချိန်တွေ လွန်သွားမှ “ဟာ” .. ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ မနေခဲ့စေချင်တာမို့ . စက္ကန့်လေးတွေရဲ့ တချက်ချက်မြည်သံတိုင်းမှာ .. တန်ဖိုးရှိတဲ့ အသိ စိတ်ကူး စိတ်စေတနာလေးတွေကို အရောင်တောက်နိုင်အောင် “လုပ်ကြစမ်းပါ . ကြိုးစားကြစမ်းပါ ”… ဆိုပြီး သတိပေးခြင်းမျိုး အမြဲဖြစ်ချင်မိပါတယ် … ။
တတ်မြောက် သိမြင်ခြင်း ပါရမီဆိုတာဟာလည်း .. မိမိရဲ့ စိုက်ထုတ်ခြင်း အလုပ်ပါတဲ့ ..။ အသိပညာ အတတ်ပညာမှာ ပါရမီပါဖို့အတွက် လက်တွေ့ လုပ်ရပ်တွေ ထုတ်ပြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်….။ ဒါမှ ဘဝတစ်ခုပေါ်မှာ ရပ်တည်နေခြင်းအပေါ် မိမိအမြင်ဟာ ကျေနပ်ခြင်းများနဲ့ ကြည်လင်တောက်ပ နေပါလိမ့်မယ် ..။ အဲ့ဒီလိုမှ မဟုတ်ပဲ ရှိနေ ဖြစ်နေ ရနေတဲ့ တနေ့တာများအပေါ်မှာ ပေါ့ပေါ့လေးလို့ ထင်မှတ်ရင်တော့ နောက်ဆုံး မိမိရဲ့ ရလဒ်ဟာလည်း ပေါ့ပေါ့လေးပဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် … ။ နောက်ဆုံး ဘယ်လိုပဲ လုပ်ခဲ့ လုပ်ခဲ့ ဖြစ်ခဲ့ပါစေ .. အဆုံးသတ် အရင်း စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ မိမိရဲ့ သတ္တဝါတိုင်းအပေါ်မှာ ထားရှိတဲ့ စိတ်ရင်း စေတနာ ကောင်းလေတော့ ကျန်ခဲ့စေချင်ပါတယ် .. ။
စာဖတ်သူတိုင်းအတွက် .. အချိန်တိုင်း .. မင်္ဂလာရှိကြပါစေ. ။
Posted in စိတ်, ဘဝTagged ဘဝ